Gossip Archives » Myanmar Family Life
မထော်မနန်းတွေလုပ်မိလို့ Mobile Legends ကစားခွင့် နှစ် ( ၃၀ ) အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကလေး
စောင်ကလေး … တော်တော်တတ်နေ ..
ဂိမ်းကိုရာသက်ပန် ပိတ်ပင်ဖို့မပြောနဲ့ .. ကိုယ်က မထော်မနန်းတွေလုပ်မိလို့ တစ်ရက်လောက်အဘန်းခံရရင်တောင် မျောက်ဟိုဒင်း သမန်းရှသလို နေမထိထိုင်မသာဖြစ်တတ်တာ။ ဒီ ကလေးလိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ .. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် သတ်သေမလားပဲ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ MLBB အကောင့်ကို ဆာဗာကနေ ဘန်းတာခံလိုက်ရတယ်။ ပြထားတဲ့ ပုံအရသူ့အကောင့်ဟာ ရက်ပေါင်း ( ၁၀၉၄၉ ) ရက်၊ ( ၁ ) နာရီ နဲ့ ( ၂၃ ) မိနစ် ကြာအောင်ဆာဗာကနေ ဘန်းပစ်လိုက်တာပါ။ ဒီအရေအတွက်ဟာ နှစ်ပေါင်း ( ၃၀ ) စာ နှစ်အပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သူ့အနေနဲ့ အကောင့်သစ်မဖွင့်ချင်ဘူး .. အဟောင်းပြန်ရတာပဲ စောင့်ပြီးဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့အသက် ( ၄၅ ) နှစ်လောက်မှ ပြန်ဆော့လို့ရတော့မှာပါ။
ခက်တာက MLBB လို မိုဘိုင်းဂိမ်းမျိုးအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း ( ၃၀ ) ကျော်လောက်ထိကြာအောင် ရပ်တည်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာပဲ။
လက်ရှိမှာတော့ ကောင်လေးရဲ့အဖြစ်က ငိုကြွေးနေသောချိဖ၊ နာကျင်နေသော ချိဖ ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီလို နာကျင်ငိုကြွေးနေတဲ့ပုံကို သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ မာ့ခ်ဆာမွန့်ထ် က ဗွီဒီယိုရိုက်ပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တင်ခဲ့တာပါ။
ဘယ်လိုတွေမထော်မနန်းလုပ်လို့ အဘန်းခံရတယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပေမယ့် youtube ပေါ်က ကွန်မန့်တွေအရတော့ သူဟာ အကြံအဖန်လုပ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေ၊ code တွေသုံးပြီး ဆော့ခဲ့တဲ့အတွက် ဆာဗာက ဘန်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။
ဒီမှာလည်း တားမြစ်ထားတဲ့ code တွေသုံးပြီး MLBB ဆော့နေကြတဲ့ တစ်ချို့ player တွေရှိတယ်နော်။ အဲ့တော့ သတိထားကြပါလို့။ အကောင့်တစ်ခုပါသွားတဲ့အခါ ဘယ်လောက် ရင်ခံ ရလဲဆိုတာ ကြုံဖူးတဲ့သူတွေပဲ သိတာမို့လို့ပါ။
ပြန်လာချင်တယ်ပြောတဲ့ Ex အပေါ် Cele တွေရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်
( မယ်လမု ဘုရားက သောကြာထောင့်မှာ ကိုးနဝင်း မိုးလင်းတဲ့ အထိ ဝင်ရင်း ဆုတောင်းလေ.. ပူဖောင်းတော့ ရချင်ရမယ် ငါ့အချစ်နင် ပြန်မရဘူး။ )
( ပါးချည်း Double ဆင့်ရိုက်လိုက်လို့ ညာဘက်သွားတွေက ဘူးသီးတောင်… ဘယ်ဘက်သွားတွေက လောက်ကိုင်… လေ့လာရေး ခရီးတွေ ထွက်ကုန်မယ် ဘာမှတ်။ Ex ဆိုတာ City mart က ဝယ်လာတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အမဲလေးထဲက ဟာလိုပဲ… တစ်ခါသုံးဖို့ အတွက်ပဲ ထိုက်တန်တာမျိူး။ )
( အနားမှာ မနေချင်လို့ ထွက်သွားလည်း I Don’t care… ပြန်လာမယ်ပြောပြီး ဒူးထောက်ပြနေလည်း I Don’t Care… Ex ဆိုတာ ကျမ ဆင်းကူးနေကျ ကန်ထဲကရေလိုပဲ… မသန့်လို့ ပိုးသတ်ဆေး အမြဲထည့် Clean လုပ်ရသလို သုံးမရတော့တာနဲ့ အသစ်ပြန်လဲလှယ်ပေးရတာမျိူး။ )
( မလိုအပ်တော့လို့ အမှိုက်ပုံထဲ ပစ်ထည်ထားခဲ့တဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံလေ… ရှိုးအပဲ့ခံ အိမ်နေရင်းတောင် ပြန်မစီးဘူး။ ကိုယ်အတွက် သုံးမရတဲ့ဖိနပ် သူများက ဦးခေါင်းထက် တင်ထားတာ မြင်ရလေ.. နောက်ဂျွမ်း 62 ခါပစ် ရယ်ချင်မိလေပဲ။ )
( မယလြမု ဘုရားက သောကှာထောငြ့မှာ ကိုးနဝငြး မိုးလငြးတဲ့ အထိ ဝငရြငြး ဆုတောငြးလေ.. ပူဖောငြးတော့ ရခငွရြမယြ ငါ့အခစွနြငြ ပှနမြရဘူး။ )
( ပါးခညြွး Double ဆငြ့ရိုကလြိုကလြို့ ညာဘကသြှားတှကေ ဘူးသီးတောငြ… ဘယဘြကသြှားတှကေ လောကကြိုငြ… လလေ့ာရေး ခရီးတှေ ထှကကြုနမြယြ ဘာမှတြ။ Ex ဆိုတာ City mart က ဝယလြာတဲ့ ကှပကြှပအြိတြ အမဲလေးထဲက ဟာလိုပဲ… တစခြါသုံးဖို့ အတှကပြဲ ထိုကတြနတြာမွိူး။ )
( အနားမှာ မနခငွေလြို့ ထှကသြှားလညြး I Don’t care… ပှနလြာမယပြှောပှီး ဒူးထောကပြှနလညြေး I Don’t Care… Ex ဆိုတာ ကမွ ဆငြးကူးနကွေ ကနထြဲကရလေိုပဲ… မသနြ့လို့ ပိုးသတဆြေး အမှဲထညြ့ Clean လုပရြသလို သုံးမရတော့တာနဲ့ အသစပြှနလြဲလှယပြေးရတာမွိူး။ )
( မောငြ့လှတခြထွားခဲ့တဲ့ ခပနြှမြးနှမြး လကတြစစြုံမှာ ကတတြီးယား စိနတြိုကကြ လကထြပလြကစြှပြ အပှငကြှီးကှီး နရောယူတာ မှငရြတော့မှ.. ဘာတဲ့ မောငြ ! ဖှစခြဲ့သမွှ တောငြးပနပြါတယြ တဲ့လား? စိတခြပွါ မောငြ ! ဒီမငျြဂလာပှဲ နဲ့ မောငြ့ လူ့ဘဝသကတြမြး Expire ကုနမြယြ့ရကြ တစထြပတြညြး ဖှစစြရပေါ့မယြ.. ဒါ ကယွမြရဲ့ သဈစာစကားပဲ။ )
( မလိုအပတြော့လို့ အမှိုကပြုံထဲ ပစထြညထြားခဲ့တဲ့ ဖိနပတြစရြံလေ… ရှိုးအပဲ့ခံ အိမနြရငြေးတောငြ ပှနမြစီးဘူး။ ကိုယအြတှကြ သုံးမရတဲ့ဖိနပြ သူမွားက ဦးခေါငြးထကြ တငထြားတာ မှငရြလေ.. နောကဂြွှမြး 62 ခါပစြ ရယခြငွမြိလပေဲ။ )
ထွားထွားကျိုင်းကျိုင်းရှိလို့ မမျှော်လင့်ဘဲ ပေါ်သွားတာပါ။ စည်သူပလပ်ကျွတ် ငိုပြီးပြောတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်
“ထွားထွားကျိုင်းကျိုင်းရှိလို့ မမျှော်လင့်ဘဲ ပေါ်သွားတာပါ။ အောက်ခံဘောင်းဘီ ခံဝတ်ပါတယ်။
Spider-Man ၀တ်စုံက ဈေးပေါတာဖြစ်လို့ အရမ်း အသားပါးတာကြောင့် ပေါ်သွားတာပါ။
ဒီဝတ်စုံကိုလည်း ထပ်မ၀တ်တော့ပါဘူး” လို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ပရိသတ်ကို တောင်းပန်လိုက်တဲ့ စည်သူပလပ်ကျွတ် နှင့် ခဏတာ။
“အမြင်ဆန်းအောင် ဂျပန်က ၀ယ်ထားတဲ့ Spider-Man ၀တ်စုံနဲ့ ဖျော်ဖြေနေပါတယ်။ ပရိသတ်က အားပေးကြလို့ Super Hero အကုန်လုံးရဲ့ ဒီဇိုင်းစုံကို ၀တ်ဆင်ပြီး အစွမ်းကုန် ဆက်ဖျော်ဖြေ ပေးသွားမှာပါ။ ဘယ်လောက်ဝေဖန် ဝေဖန် ကျနော်က မေတ္တာထားပါတယ်။ ” ဆိုပြီး သရုပ်ဆောင် စည်သူပလပ်ကျွတ် ကပြောခဲ့ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် စည်သူပလပ်ကျွတ်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်
မကြာခင် ဂယက်ထလာတော့မယ့် စူးရှထက်​ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အကြမ်းစား သီချင်းဗီဒီယို
ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိပြီး ချစ်ရတဲ့ မိသားစုရဲ့ရှေ့ကနေ ရပ်တည်နေတဲ့ မော်ဒယ်မလေး စူးရှထက်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ စူးရှထက်ကတော့ အမိုက်စား သီချင်းဗီဒီယိုတစ်ခုကို ရိုက်ကူးနေတဲ့ သူမရဲ့Live ဗီဒီယိုလေးကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ညှို့အားပြင်းတဲ့ကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စူးရှထက်နဲ့ အလန်းစားအဆိုတော်ကောင်လေးတို့ရဲ့ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်က ဗီဒီယိုကလေးကတာ့ အရမ်းကို ကြည့်လို့ကောင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မကြာခင်အချိန်မှာ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဂယက်ထလာတော့မယ့် အကြမ်းစားသီချင်းဗီဒီယိုလေးကို ရိုက်ကူးနေတဲ့ စူးရှထက်ရဲ့Live ဗီဒီယိုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နေ်ာ။
အတိုင်အဖောက်ညီညီ သရုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ စူးရှထက်တို့နှစ်ဦး
ရိုက်ကွင်းမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးတွေ့ရတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပုံစံကတော့ တကယ့်ကို ပျော်စရာကြီးပါပဲနော်။
မကြာခင် ဂယက်ထလာတော့မယ့် အမိုက်စားသီချင်း MTVကို ရိုက်ကူးနေတဲ့ စူးရှထက်ရဲ့live ဗီဒီယို
စူးရှထက်ကတော့ နာကျင်ခဲ့တဲ့အတိတ်တွေကိုမေ့ထားပြီး လတ်တလောမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘကိုသိတတ်တဲ့ သမီးလိမ္မာလေး စူးရှထက်ကတော့ သူမရဲ့လုပ်အားခနဲ့ မိဘကိုလုပ်ကျွေးနေသူလေးပါ။ ချစ်ပရ်ိသတ်တွေလည်း မကြာခင်မှာ ကြည့်ရှုကြရတော့မယ့် စူးရှထက်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုလေးထွက်လာရင် အားပေးကြည့်ရှုပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။